आज हरिबोधनी एकादशी, जानौं गुणैगुणले भरिएको तुलसीको फाइदाबारे | Hamro Doctor News
आज हरिबोधिनी एकादशी, तुलसीको विवाह गर्ने दिन । चार महिनाअघि अर्थात् आषाढ शुक्ल एकादशीको दिनमा आ–आफ्नो घरमा रोपिएको तुलसीलाई आजको दिन मठ सिंगारेर विशेष पूजा गरी विष्णु भगवानका अर्का रुप पिपलसँग विवाह गरिदिने परम्परा रहिआएको छ ।
तुलसीलाई धार्मिक मात्रै नभई चिकित्सकीय शास्त्रमा पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । विशेषगरी आयुर्वेदमा तुलसीको बढी महत्त्व र उपयोग हुने गरेको छ । गुणै गुणले भरिएको तुलसीलाई पुजा गर्नेदेखि आफूलाई स्वस्थ राख्नलाई यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तुलसीले जाडो मौसममा मात्रै नभई गर्मीको समयमा हुने विभिन्न रोगको संक्रमणबाट पनि मानिसलाई जोगाउँछ ।
आयुर्वेद डा. सविन दवाडीका अनुसार यस्ता छन् तुलसीका फाइदाः
तुलसीको हरियो पातको रसमा ज्वानोको धुलो मिसाएर खाएमा पेटको जुका मर्दछन् ।
तुलसीका ९–१० पात र आधा गिलास मनतातो पानी राखी त्यसमा मह मिसाएर दिनको ३–४ पटक पिएमा रुघाखोकी निको हुन्छ ।
तुलसीको रसलाई सफा कपडाले छानेर दुई थोपा कानमा राखेमा कानको दुखाई ठीक हुन्छ ।
माकुरा र मुसाले टोकेको ठाउँमा तुलसीको पातको रस लगाएमा तत्काल आराम मिल्छ ।
तुलसीको दाना (बिऊ)वा पात पिंधेर गाईको दूधसँग मिसाएर खाएमा पखाला लागेको रोकिन्छ ।
तुलसीको १५–२० वटा पातलाई पानीमा राखेर उमाली त्यसमा थोरै विरेनुन राखेर खाँदा पेट ढुस्स परेको र अपच भएको निको हुन्छ ।
तुलसीको रसले कुल्ला गरेमा दाँतबाट रगत बग्न रोकिन्छ र डाइरियामा लाभ गर्छ ।
बच्चाको पेट दुखेमा तुलसीको रस मनतातो बनाएर दुई चम्चा दिनको २ पटक खानेगरेमा पेट दुख्न बन्द हुन्छ ।
आयुर्वेदमा पनि तुलसीको महत्वका बारेमा निकै चर्चा गरिएको छ । करिब–करिब सबै नेपालीको घरमा तुलसीको पात राखिएको हुन्छ भन्दा अतियूक्ती नहोला । तुलसीको पूजा गर्नुका साथै यसको डाँढ तथा पातलाई औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तर धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्दछ की तुलसीको पातले साइड इफेक्क पनि गर्छ ।
बहुगुणी तुलसीको पात कुन अवस्थामा कसले सेवन गर्दा बेफाइदा हुन्छ ? जानौं :
गर्भवती महिलाका लागि ठीक हुँदैन
मधुमेहका बिरामीले खानु हुँदैन
तुलसीको पातलाई चपाएर भन्दा सिधै निल्न चिकित्सकहरुले सुझाव दिने गर्दछन् । किने भने तुलसीमा रहेको एक प्रकारको तत्वले मानिसको दाँतमा कालो दाग वा दब्बा बनाइदिन सक्दछ । यसकारण दाँतको प्राकृतिक चमक हराउन नदिन पनि तुलसीको पात चबाएर खानु राम्रो हुँदैन् ।
Last modified on 2021-11-15 12:14:08